Coaching & Imikhiqizo
Inhlonipho - impumelelo ilula kanjalo!
Usale kahle Shy
Khuluma kancane, yisho okuningi
Bhuka umhlangano wamasu
Impumelelo yakho isivele ikuwe ...
Inhlonipho ingamandla omlingo enza izimangaliso, iphilisi eliyisimangaliso lempumelelo, futhi empeleni akuqondakali ukuthi sonke besingenazo izifundo zesikole kulesi sifundo esibalulekile kusukela ebangeni lokuqala.
Yingakho ngibhalele le ncwadi wonke umuntu obefana nami, osezame isikhathi eside kakhulu kepha engathuthuki ngendlela afuna ngayo futhi efanelekile.
Ku- "Inhlonipho - impumelelo ilula kakhulu" Ngikukhombisa ifomula yomlingo, ngikukhombisa ukuthi kuhlale kulula futhi kulula kanjani ukuya phezulu, empumelelweni yakho yonke nokuzuzisa wonke umuntu.
Cela incwadi yamahhala manje
Isebenza kanjani inhlonipho, ukuthi singaletha kalula kanjani inhlonipho enkulu kubo bonke ubudlelwano nokuthi ukwazisa okuhle nokusheshayo kusebenza kanjani - yilokho engikuchazile encwadini.
Uma ufana nami, uphelelwe yisineke futhi uzibophezele futhi ufuna impumelelo, khona-ke ukuqeqesha kungaba yinto nje kuwe ... Ngomeluleki ngakithi, akusheshi kuphela futhi kulula, futhi kudinga ukuzama okungatheni kakhulu nephutha .
Zitholele ngokwakho ingxoxo yesu lamahhala yemizuzu engama-45 nami. Isikhathi yimali, bathi. Kepha ngaphezu kwalokho, kunezindleko zamathuba, izindleko zokunganaki, ukubambezeleka, ukubambezeleka ngokweqile, i-ergo yokulahlekelwa. Izindleko ongeke uzibone futhi uziqonde futhi ekugcineni ezisibiza kakhulu.
Thola ukuqokwa kwamahhala okulandelayo nami njengamanje - ngikulangazelele!
Amahhala angama-45-min. Bhuka umhlangano wamasu
Inhlonipho - impumelelo ilula kanjalo
Ingabe ungusomabhizinisi, umuntu ozisebenzayo noma ingcweti?
Ngabe usebenza kakhulu futhi uphupha ngokuba nomoya omningi?
Ngabe ufisa ukukwazi ukufeza amanani angcono nezimali eziphakeme zezinsizakalo zakho eziphezulu emakethe?
Noma ingabe ufuna izinto zibe lula, zibe ngcono futhi zijabulise?
Ngemuva kwalokho kufanele uvumele omunye wamandla aqine kakhulu akusebenzele - esikhundleni sokufaka amandla angenamkhawulo emisebenzini yakho.
Ngikhuluma ngenhlonipho. Ngeqiniso, inhlonipho yangempela wena nendawo okuyo. Uzomangala ukuthi kwenzakalani. Kulula, kuyashesha futhi kungcono ...
Bambalwa kuphela abakubonile.
Inhlonipho iyisihluthulelo - futhi kufanele uyisebenzise manje. Ukuze kuzuze amakhasimende akho, umndeni wakho kanye nawe.
Inhlonipho mhlawumbe ingamandla aphansi kakhulu emphakathini wethu. Sifunde okuncane ngakho esikoleni, ingasaphathwa eyokuqonda ukuthi singayisebenzisa kanjani inhlonipho empilweni yansuku zonke ukuze kuzuze wonke umuntu obandakanyekayo.
Ngikubonile lokhu kuphela ngemuva kweminyaka eminingi ngisemsebenzini wami, futhi unkosikazi wami wayengudokotela wokubelethisa futhi engiqeqesha ngasikhathi sinye.
Futhi into emangalisayo ukuthi: ulwazi lulodwa alwanele neze.
Ngisho nangemva kokuba ngikholwe ukuthi ngiyawuqonda lo mqondo, kusathatha iminyaka yokusebenza nokwenza isicelo ukuthola imininingwane eminingi ngokwazisa nenhlonipho, nokuqonda uhlelo oluyisisekelo sayo.
Wonke umuntu nakanjani angenza okufanayo, azitholele yena - futhi atshale isigamu sempilo yobungcweti ngayo ...
Kepha uma ungenasineke, unelukuluku lokwazi, futhi ulambile, njengami, ngingajabula ukukubonisa isifinyezo. Kulula kakhulu ...
njengoba kwenza izingane ezincane: kwenze kuqala - bese uqonda.
Futhi ongakwenza, igxathu negxathu, ngizokukhombisa futhi ngizojabula ukukukhapha. Uma uthanda. Izimangaliso ziqinisekisiwe, impumelelo ezenzekelayo ayikhishwa.
Bhalisela inkulumo yamahhala yamahhala nami sibone ukuthi kwenzekani ngawe. Ngibheke phambili ekukwazini uqobo.
I-JT Foxx Chicago - Inhlonipho Isisekelo Sakho Konke
Cha. 1 umqeqeshi webhizinisi, usomabhizinisi oyindilinga, umthengisi wezindlu nomnikazi wangasese, i-JTFoxx ngamandla enhlonipho nolwazi lwakhe neJuergen emcimbini wezinsuku ezi-5 webhizinisi eLondon.
UPatrick, usomabhizinisi osemncane, u-8: 1 coaching amasonto ayi-1.
Ngithole imingcele yami, ngagxila ekuqondeni kwami, ngakhulisa ukuzethemba kwami, ngathola izindlela ezintsha futhi ngaletha ibhizinisi phambili. Bekufanele, kunconyiwe.
U-Irem, umfundi wezomthetho kanye nosomabhizinisi abazoba ngusomabhizinisi nabasomabhizinisi bezokuxhumana mayelana ne-zoom coaching neJuergen, maphakathi nesikhathi seCorona.
Amazwi Omhlaba Onhlonipho
Izingxoxo "Zokuhlonipha" emhlabeni wonke ngo-2019 nango-2020.
UFred Fishback, isikhulu esiphezulu seJavelin Industries - Inhlonipho
Inhlonipho - into ebaluleke kakhulu futhi edingekayo namuhla.
Umqondo wenhlonipho uyisisekelo, yilokho okufanele ukwazi ukulawula kuqala.
Sidinga ubulula balo mqondo.
Ngicabanga ukuthi ukunto ebaluleke kakhulu futhi ngijabule kakhulu ngalokho okwenzayo iJuergen.
Inhlonipho iyisisekelo sobudlelwano bethu,
inhlonipho iyisisekelo sokuzethemba,
inhlonipho iyisisekelo sokukhula okwengeziwe.
Ngijabule kakhulu ngalokhu okwenzayo, umqondo onamandla kakhulu.
Ingqungquthela eLondon's Law Society ehlonishwayo
Izingxoxo ezifingqiwe mayelana ne- "Inhlonipho" kwiNgqungquthela Yezebhizinisi 2020 e-Law Society yaseLondon.
Inhlonipho Ingxoxo neHilton London Metropole
Ingxoxo efingqiwe "Inhlonipho" ka-2020 eHilton London Metropole Lobby
Ngimkweleta kakhulu, ubeka konke kumaphrojekthi enhliziyo yakhe, uvulekele umhlaba futhi akesabi ushintsho, akesabi izinselelo ... Ezinyangeni eziyisithupha engimazi ngazo, usevele wangisiza kakhulu ekucabangeni kwami ​​siqu, uzophuma kuphela lapho ngokuhlanganisa.
© UJuergen Wilke